Taare Zameen Par (2007) | MM Movie Store
Bollywood Drama Family
IMDb Rating (8.6) ရရှိထားတဲ့ မိသားစုတိုငျးကွညျ့ရမယျ့ဇာတျကားလေးပါ…3 Idiots မငျးသား Aamir Khan ကိုယျတိုငျရိုကျကူး/သရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားပါ…
အကွငျနာတရားကငျးမဲ့တဲ့ အပွိုငျအဆိုငျကမ်ဘာ ကွီးမှာလူတိုငျးက ထိပျတနျးတှအေကောငျးဆုံးတှခေညျြး မှေးခငျြနကွေပမေယျ့ ကလေးလေးတှကေတော့ သူ့အတှေးသူ့ကြှမျးကငျြမှု သူ့အရညျအခငျြးနဲ့သူပါ…လူတှအေကွောငျးကိုအကောငျးဆုံးပုံဖျောထားတဲ့ရသအမွောကျဆုံးဇာတျကားတဈကားပါ…
အရာအားလုံးကို ပုံသကေားခပျြ နလပိနျးတုံးတဈယောကျလိုတှေးတောနလေို့မရဘူးဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာ ပွသှားတာကိုကွညျ့ရငျးကြှနျတျော ဖတျဖူးတဲ့ ဥပမာ တဈခုကိုသတိရမိပါတယျ….– တွိဂံ တဈခုရဲ့ အတှငျးထောငျ့အားလုံးပေါငျးခွငျးဟာ180 ဒီဂရီ ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ သငျခဲ့ဖူးပါတယျ.
.ကွမျးပွငျမှာ တွိဂံ တဈခုဆှဲပါ..တိုငျးပါ..အတှငျးထောငျ့အားလုံးပေါငျးခွငျးဟာ 180 ဒီဂရီပါ..မှနျပါတယျ…ဒါဆိုရငျ သငျ့ကို မွောကျဝငျရိုးစှနျး၊ အမရေိကနျဂပြနျ ကိုဆကျထားတဲ့ တွိဂံပုံစံ တံတားတဈခုဆောကျခိုငျးပါမယျ…သငျက အတှငျးထောငျ့အားလုံးပေါငျးခွငျးကို 180 ဒီဂရီဖွငျ့တှကျပါမယျ…
တံတားကိုဆောကျပါပွီ…တံတားက တဈခုနဲ့တဈခု အဆငျပွပွေေ ဖွောငျ့ဖွောငျ့တနျးတနျးမဆကျမိတော့ပါဘူး….ဘာလို့ပါလိမျ့…?????အဖွကေတော့ ကြှနျတျောတို့ ကမ်ဘာ ဟာအလုံးကွီးပါ…ဘောလုံးလို အခုံးမကျြနှာပွငျပျေါက တွိဂံတဈခုရဲ့အတှငျးထောငျ့တှပေေါငျးခွငျးဟာ 180 ထကျကွီးပါတယျ…
အခှကျမကျြနှာပွငျဆိုရငျ180ထကျငယျပါတယျ…Relativity သဘောတရားကိုတှရေ့ပါမယျ…(ဒီထကျပိုပွီးလလေ့ာခငျြရငျ Einstein’s Theory of General Relativity ကိုလလေ့ာသငျ့ကွောငျးပါ)
IMDb Rating (8.6) ရရှိထားတဲ့ မိသားစုတိုင်းကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ…3 Idiots မင်းသား Aamir Khan ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူး/သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ…
အကြင်နာတရားကင်းမဲ့တဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ကမ္ဘာ ကြီးမှာလူတိုင်းက ထိပ်တန်းတွေအကောင်းဆုံးတွေချည်း မွေးချင်နေကြပေမယ့် ကလေးလေးတွေကတော့ သူ့အတွေးသူ့ကျွမ်းကျင်မှု သူ့အရည်အချင်းနဲ့သူပါ…လူတွေအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားတဲ့ရသအမြောက်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားပါ…
အရာအားလုံးကို ပုံသေကားချပ် နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်လိုတွေးတောနေလို့မရဘူးဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပြသွားတာကိုကြည့်ရင်းကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုကိုသတိရမိပါတယ်….– တြိဂံ တစ်ခုရဲ့ အတွင်းထောင့်အားလုံးပေါင်းခြင်းဟာ180 ဒီဂရီ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့ဖူးပါတယ်.
.ကြမ်းပြင်မှာ တြိဂံ တစ်ခုဆွဲပါ..တိုင်းပါ..အတွင်းထောင့်အားလုံးပေါင်းခြင်းဟာ 180 ဒီဂရီပါ..မှန်ပါတယ်…ဒါဆိုရင် သင့်ကို မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း၊ အမေရိကန်ဂျပန် ကိုဆက်ထားတဲ့ တြိဂံပုံစံ တံတားတစ်ခုဆောက်ခိုင်းပါမယ်…သင်က အတွင်းထောင့်အားလုံးပေါင်းခြင်းကို 180 ဒီဂရီဖြင့်တွက်ပါမယ်…
တံတားကိုဆောက်ပါပြီ…တံတားက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အဆင်ပြေပြေ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းမဆက်မိတော့ပါဘူး….ဘာလို့ပါလိမ့်…?????အဖြေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ ဟာအလုံးကြီးပါ…ဘောလုံးလို အခုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်က တြိဂံတစ်ခုရဲ့အတွင်းထောင့်တွေပေါင်းခြင်းဟာ 180 ထက်ကြီးပါတယ်…
အခွက်မျက်နှာပြင်ဆိုရင်180ထက်ငယ်ပါတယ်…Relativity သဘောတရားကိုတွေ့ရပါမယ်…(ဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာချင်ရင် Einstein’s Theory of General Relativity ကိုလေ့လာသင့်ကြောင်းပါ)
Mr. Robot (Season 2) အပိုငျး (၆)